यस्तै दृश्य टुलुटुलु हेरेर बसिरहनुपरेको छ....
उपाय पनि केही छैन ! सबै त शक्ति कै आधार मा हुने रहेछ । पहिले दरबार को भर तरबार भन्थे । अहिले को राजनिति को स्थिति पनि त्यहि नै छ !
सरकारमा रहेहरू हो सुन ।
कि गर राजिनामा कि तह लगाऊ आन्दोलनको नाममा जनतालाई शास्ती दिनेहरूलाई ।
कि गर राम्रो काम कि राम्रो काम गर्नेलाई छोड ।
जुङ्गाको लडाई नलड बरू जुङ्गा फालिदेऊ ।
देश बनाऊ नबिगार ।
ब्यक्तिबादी चिन्तन त्याग ।
कम्युनिस्ट होऊ भने पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथी उठेर मार्क्सको परिकल्पना बमोजिमको साम्यवादी समाजको निर्माणमा आजै देखि लाग।
होइन भने झूठको खेति नगर ।
म माकुने समर्थित त हैन तर माधव कुमार नेपालले यसरी सडकबाट प्रदशन गर्दैमा लुरुक्क परेर राजिनामा दिनुपर्छ भन्नेमा म छैन ।
आज माओवादीले सडकबाट राजीनामा माग गर्छ , भोली प्रचण्डको सरकार बनेपछि फोरमले सडकबाट माग गर्ला । के यसरी नै सत्ताको परिवर्तन गर्ने खेल खेल्नको लागि नेपालले राजिनामा दिने ?????
व्यक्तिविशेषको राजिनामाको माग माग्ने विभिन्न उपायहरु हुन सक्छन होला । माओवादिले रोजेको यो बाटो पुर्णत धृणित छ ।
यसरि देश ठप्प पारेर बस्ने सबै राजनितिकर्मिहरुलाई साथ दिन अझै नेपाली जनताहरु किन पछी पर्छन भन्या ?
आन्दोलनको बेला पनि यसरि फोटोहरु पस्किनु भएकोमा धन्यवाद सुजन जी
कहिले सम्म यो दृश्यहेरी रहनु पर्ने हो कुन्नि?
जनतालाई कष्ट दिने मति नष्ट होस् | सहमति र प्रगतिको मति प्रष्ट देखियोस |
लोडसेडिगंले गर्दा भाउजूले क्यमाराको ब्याट्री चार्ज गर्न पाउनु भएनछ जस्तो छ।